महँगीको मारमा उपभोक्ता, कुनमा कति बढ्यो ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
महँगीको मारमा उपभोक्ता, कुनमा कति बढ्यो ?
काठमाडौं । चाडबाडमा मीठो खान र राम्रो लाउन सबैलाई रहर हुन्छ । व्यापारीले भने यही बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ बढाएका छन् । यसले दसैंमा आम उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाएको छ । भान्सामा उपभोग हुने धेरै वस्तुमा १५ देखि २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । हरियो तरकारीदेखि फलफूलसम्म, चामलदेखि खानेतेलसम्म भाउ बढेको छ । सुख्खा फलफूलको मूल्य पनि अचाक्ली बढाइएको छ ।
६० रूपैयाँ प्रतिकिलोको बोडी ८० पुगेको छ । ७० रूपैयाँको सिमी ९० मा पुगेको छ । लौका ३० रूपैयाँ पाइन्थ्यो, दोब्बर बढेर ६० भएको छ । घिरौला र भिन्डी, परवलको मूल्य बढेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले चाडपर्वको मुखमा आएर व्यापारीले मूल्य वृद्धि गरेको स्वीकार गरे । उनले केही व्यापारीले आफूखुशी मूल्य बढाएको र केहीले प्रक्रियागत कारणले बढाएको बताए । अन्नपूर्णपोष्टबाट